काठमाडौं, मंसिर २७–दुईदिने ग्लोबल अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । २१औं शताब्दीको नेतृत्व, दिगो विकास र उच्च शिक्षाका विषयमा छलफल गर्न सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । शुक्रबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै देश विकासका लागि नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए । विकासका नयाँ आयमहरूमा सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री भट्टले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालको विकासमा टेवा पुग्ने बताए ।
‘हिजोको ज्ञान भोलिका लागि काम नलाग्न सक्छ । त्यसैले नयाँ ज्ञानको खोज अनुसन्धान गर्न सम्मेलनको आयोजना गरेका हौं,’ ग्लोबल कलेज अफ इन्टरनेसनलका अध्यक्ष पुष्कर वज्राचार्यले भने । ‘२१औं शताब्दीको नेतृत्व र डेभलपमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ ? हिजोको विकासको परिभाषा आजका लागि उपयुक्त छ कि छैन ? विकासको नयाँ परिभाषा के हुन सक्छ ? यी विषयमा बृहत् रूपमा खोजी गरिनेछ,’ उनले भने ।
विद्यार्थीमा ज्ञानको वृद्धि गर्न सम्मेलनको आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘सम्मेलनमा विद्यार्थीहरूलाई पनि सहभागिता गराइएको छ,’ उनले भने,‘यसबाट विद्यार्थीहरूमा नेतृत्व गर्ने क्षमता, विकासका अवधारणा, ज्ञान, सीप सिक्ने अवसर पाउनेछन् ।’ ग्लोबल कलेजका प्रिन्सिपल देवराज पनेरूका अनुसार सम्मेलनका लागि आठवटा विषयमा १ सय ५० भन्दा बढी रिसर्च पेपर आएका थिए । तीमध्ये छनोट भएका ३८ वटा रिसर्च पेपर प्रस्तुत गरिनेछ ।
सम्मेलनमा नेपाललगायत बंगलादेश, इन्डिया, इटाली, अमेरिका, अस्ट्रेलिया इजरायलका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गरी १ हजारभन्दा बढीले सहभागिता जनाएका छन् । ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, ग्लोबल कलेज अफ इन्टरनेसनल र ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर पोलेसी रिसर्च डेभलपमेन्टको आयोजनामा पहिलो पटक सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । सम्मेलन शनिबारसम्म चल्नेछ ।